कतै तपाईलाई पनि औधी नै पसिना आउने समस्या छ भने यस्तो भन्छन डाक्टर साहेवले - Eall Nepal
कतै तपाईलाई पनि औधी नै पसिना आउने समस्या छ भने यस्तो भन्छन डाक्टर साहेवले
यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्‍याउँछ, शरीरमा पसिना किन आउँछ ?
शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाबिक प्रक्रिया हो । यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्‍याउँछ । पसिनाको माध्यमबाट शरीरभित्र भएको बिकार बाहिर आउँछ । शरीरबाट पसिना निस्केन या कुनै कारणवस पसिना भित्रै रोकिन गयो भने जसको फलस्वरुप कैयौं प्रकारका शारीरिक रोगहरु उत्पन्न हुनसक्छ ।
अतः शरीरलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि पनि शरीरबाट पसिना निस्किनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसैले मानिस अचेल पसिना आउनेगरी साईक्लिङ, व्यायाम, जगिङ्, मोर्निङवाक या जिममा गएर पसिना निकाल्ने गर्दछन् । तर कहिलेकाहिँ आवश्यकता भन्दा बढीमात्रामा तथा बिनाकारणबस शरीरबाट पसिना आउनथाल्छ । बढी पसिना आउनलाई चिकित्सा विज्ञानमा हाईपरहाईड्रोसिस अर्थात अत्यधिक पसिना आउनु भनिन्छ । एक तथ्याङअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको करिब दुईप्रतिशत मानिसहरुमा हाईपरहाईड्रोसिस भएकोअनुमान गरिएको छ । सामान्यतः महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुलाई धैरै मात्रामा पसिना आउने गर्दछ ।
छालाको भित्री सतहमा अवस्थित स्वेट ग्रन्थिबाट पसिना बन्दछ । यो ग्रन्थिको काम भने शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो । अत्यधिक गर्मीका कारण छालालाई डढ्नबाट जोगाउनुका लागि स्वेट ग्रन्थिले छालाको माथिल्लो सतहमा नुनयुक्त पानी (पसिना) उत्पन्न गर्दछ। जसलाई पसिना भनिएको हो । पसिना आफैंमा गन्धरहित हुन्छ । शरीरबाट निस्केको पसिनाको स्वाद प्रायः नुनिलो हुन्छ ।
पसिना कसरी आउँछ ?
शरीरमा पसिना आउनका विभिन्नकारणहरु छन् । वंशानुगत कारणले पनि बढी पसिना आउँछ । गर्मीमा धेरै शारीरिक श्रम गर्नु, खेलकुदको अभ्यास वा व्यायाम बढी गर्नु, तेलयुक्त मसालादार खाना बराबर खानु, कब्जियत हुँदा पनि पसिना बढी आउँछ । यसबाहेक कुनै शारीरिक रोग भएमा जस्तैः मलेरिया, टाइफाइड, डेंगु, ज्वरो, छातिको टिबी, रगत दुषित हुनु, एनिमिया, मानसिक तनाव, चिन्ता, घबराहट, डर, भय, आघात र कडा ज्वरोको कारण पनि बढी पसिना आउँछ । अन्य कारणहरुमा- तातो पेयपदार्थ पिउनु, खैनी, गुट्खा, काँचो सुपाडी तथा नशालु पदार्थको सेवनगर्नु । यसैप्रकार शरीरिक रुपले अत्याधिक मोटोहुनु तथा थाइराइड ग्रन्थि शरीरको ईम्युनो सिस्टमको कारण बढी सक्रिय भयो भने पनि व्यक्तिलाई धैरै पसिना आउने हुन्छ ।
हुन त पसिना शरीरको जुनसुकै ठाँउमा पनि धेरै-थोरै आउनसक्छ । तरपनि पसिना आउने खास ठाँउहरु हाम्रो शरीरमा यसप्रकार छन् । जस्तैः हत्केला, खुट्टाकापैताला, काखी, फिलाको काप यी भागहरुमा प्रायः पसिना बढी नै आउने गर्छ । यसबाहेक टाउको, निधार, माथिल्लो ओठ, पिठ्यु, पेट तिरपनि पसिना आउँछ । कारण के हो भने स्वेटग्रन्थिहरु शरीरको भित्री भागमा-हत्केला र खुट्टाको पैताला तिर बढी मात्रामा हुन्छन । ति स्वेटग्रन्थिहरु अतिसक्रिय भएपछि बढीपसिना आउँछ ।
पसिनाको गन्धः शरीरबाट निस्केको पसिना यदि वाष्पिकरण (वाफ) भएर जान सकेन भने पसिना गन्हाउन थाल्छ । शरीरको बाहिरी भागमा मृत छालाको पत्र हुन्छ, धैरेपसिना आउनाले छालाको पत्रलाई ओसिलो बनाउँछ । ओसिलो ठाउँमा ब्याक्टेरियाहरुले हुर्किने अनुकुल वातावरण पाउने हुँदा त्यहाँ चाँडै दुर्गन्ध उत्पन्न हुन्छ । साथै पसिना सुकेपछि व्यक्तिले लगाएको लुगामा विभिन्न प्रकारका सेतो, पहेलो, रातो, कालो, टाटेपाटे पसिनाका दागहरु बस्न थाल्छ । कतिपय व्यक्तिको पसिनामा दुर्गंन्ध पनि धैरै हुन्छ ।
मुख गन्हाउने व्यक्ति वा शरीर गन्हाउने व्यक्तिलाई आफैंबाट दुर्गन्ध आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । सँगै बस्ने, सँगै हिँडने सहयात्रीलाई त्यो दुर्गन्ध खपिनसक्नु हुन्छ । जसको कारणले गर्दा व्यक्तिले सार्वजनिकस्थल, सभा-गोष्ठि र साथीभाइ माँझमा बस्दापनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तै गर्मीमा अत्यधिक पसिना निस्किने कारणले कतिपयलाई दैनिक कामकाज गर्नको लागि समेत अप्ठ्यारो हुन्छ । यसअर्थ बढी पसिना आउनेले नियमित रुपमा आफ्नो शरिरको सरसफाईमा ध्यान दिएन भने किटाणुहरु हुर्किन पाउँछन् र जीऊ चिलाउनुका साथै घाउखटिरा आउने हुन्छ।
विषेशगरी पैताला, काखी, कास र हत्केलामा बढी पसिना आउने भएकाले शरीरका यी अगंहरुको सरसफाईमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सरसफाइको लागि महँगो साबुनको जरुरत पर्दैन । साधारण खालको नुहाउने साबुन र पानी नै प्रर्याप्त हुन्छ ।
बढी पसिना आउन नदिन के गर्ने ?
शरीरमा बढीपसिना आउन न दिनका लागि सबभन्दा राम्रो उपाय हो शरीरलाई शीतल राख्नु हो । यसको लागि घाम चर्किएको बेला घाममा ननिस्किने, दौडधुप र व्यायम कम गर्ने, शीतलमा बस्ने, नियमित नुहाउने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, पानी प्रशस्त मात्रामा खाने, आफ्नो खानामा हरियो साग-सब्जीकासाथै दही, मही, तथा मौसमअनुसारको पानीयुक्त फलफूलहरु तरबुजा, खरबुजा, काँक्रो बढीमात्रामा खाने, नरिवल पानी पिउने, चिया, कफि, बरफको सेवन नगर्ने, राति अबेरसम्म नबस्ने, धैरे बेर भोको नरहने, बढी मसालादार खाना नखाने, खानामा लसुन, अदुवा , गोलमरीचको प्रयोग कम गर्ने र प्याजको मात्रा बढाउने गरियो भने अत्याधिक आउने पसिनाको मात्रालाई घटाउन सकिन्छ ।
केही मानिसहरु बढी पसिना आउने डरले पानी कम पिउने गर्दछन् । यो राम्रो होईन, पानीको मात्रा शरीरमा कम भयो भने डिहाईड्रेसन हुनसक्छ । यी सबै उपायहरुलाई मनन गरी अपनाइयो भने केही हदसम्म बढी पसिना आउने समस्यालाई घटाउन सकिन्छ । उपर्युक्त विधिको पालन गर्दा पनि शरीरमा पसिनाको मात्रा सामान्य भएन भने चिकित्सकको सल्लाहमा औषधिको सेवन गर्नुपर्छ ।
होमियोप्याथिक चिकित्सा विधिमा आवश्यकता भन्दा बढीमात्रामा तथा कुनै कारण बिना नै शरीरबाट पसिना आउँछ भने यस अवस्थामा रोगीलाई उसको रोग लक्षण अनुसार प्रयोग गरिने केही होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्नलिखित छन्ः
(१०) यदि निदाएको बेला मात्र पसिना आउनु र ब्युँझिएपछि हराउनु अर्थात नआउनु । यस प्रकारको लक्षणभएका रोगीलाई कोनियम नामक औषधिको प्रयोग हितकारी हुन्छ ।
उपरोक्त होमियोप्याथिक औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो नजदिकको कुनै प्रशिक्षित योग्य तथा अनुभवी चिकित्सकसँग परामर्श लिइ गरेमा लाभदायक हुने छ । कान्तिपुर दैनिक
मैले घर छाडेको त्यो दिन अनि फाटेर सिलाएको त्यो च्यात्तिएको बा को चप्पल:
केपी ओलीकै गृहजिल्लाका वडा अध्यक्ष दारुखाएर सडकमा घोप्टीएको फोटो भाईरल: के कम्युनिस्टले जे गर्दा नि कानुनको डर उनिहरुलाइ छैन ?